Zvirongedzo zvepanyama muupenyu hwezuva nezuva - mazano ekushandisa
Zvimwe zvipfeko zvepanyama mubasa ravo | Cosmetics & Wellness
Zvakakosha kuziva nezvezvisikwa zvezvisikwa
Kutarisira michero kunofanira kunyanya kuchenesa ganda nekuita kuti rive rakanaka. Zvizhinji zvekutengesa zvinokuvadza kuhutano. Zvizhinji zvezvinhu zvinokonzerwa nezvipembenene zvakabatanidzwa nezvirwere. Nokuda kwechikonzero ichocho, iwe unofanirwa kusarudza zvipfeko zvepanyama uye usapedza kushandisa makemikisi kakawanda sezvinobvira.
Zvechokwadi neine zvipfeko zvepanyama
Shower gels, iyo inogadzirwa kubva kuzvinhu zvinokonzerwa nezvisikwa, inowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana, pamwe nemango vanilla, pomegranate, ropa re orange uye nezvimwe zvakawanda. Iyo inowanzoshambwa gel gel inoshandisa mafuta emaminerari. Muzvipfeko zvepanyama iwe uchawana kokonati mafuta. Kunyanya kune ganda rakaoma kana rakaoma, rinonyatsokodzera sezvo risingasvibisi ganda zvakanyanya.
Gadzira mazano nemasikirwo echisikigo
Iko-self-tanner yega yega inobvumiranwa zvakanaka neganda rakachena, sezvo inonyanya kuvepa ganda. Asi-hausi iye anozvidzivirira, nokuti ganda rose rinoita zvakasiyana. Vanozviti vese vanoratidzira vane mishonga yemishonga uye inokuvadza chete. Iwe unofanirwa kuparadzanisa huni-tanner yechiso uye yemuviri. Chiso chacho chinowanikwa pachena kune zuva pane muviri.
Chisikiro cheganda sezvipfeko zvepanyama zvinongova nemuorivhi wezuva. Izvi zvinoratidza zuva segirazi. Kunyanya ne-skin sensitive iwe unofanira kushandisa zvisikwa zvinokonzerwa nezuva. Inoramba iri paganda uye zvinogona kuita kuti kuchengetedzwa kwakakwana.
Hair Kugadzira zvinogadzirwa
Bvudzi gel uye vhudzi zvinoputira mumasikirwo - hutsika haisi yakanaka chete kune zvakatipoteredza, asiwo kune vanhu vane chirwere chakasimba. Musoro wemapuranga ane bvudzi haatauri zvinopisa, zvidhina zvematare, zvinonhuwira zvemafuta uye silicones uye zvichiri kupa vhudzi zvakanaka uye chiedza chikuru.
Parizvino, kune mavara ose emvere mune zvisikwa zvezvisikwa. Mavara echisikigo akaputira vhudzi semucheka. Mishonga yemhuka inopa hutsi huzere uye humwe. Mvere dzembudzi dzinenge dzisina mazodzivirira, kwete mavara ekugadzira uye kwete zvivako zvekugadzira. Dysted hair dyes zvakare haiparadzi chimiro chebvudzi rako.
Mafuta eGeranium anofanira kunge akabudirira uye ane simba se vitamin A. Bhakitiriya yakanyanya kuberekwa inouyisa hunyoro binder hyaluronic acid. Izvi zvinoita kuti ganda rione sediki uye rinowedzera kupera pasina nguva.
Iko kunewo zvakasarudzwa kusarudzwa kwezvinhu zvakasikwa zvekugadzirwa kwekugadzira. Vongai nokunaka kwavo kwakanaka, ivo vanonyanya kushandiswa nemhando dzakachena dzeganda. Kazhinji vane zvigadzirwa zvinopa uye zvinozorodza. Iwe haufaniri kuita kunze kwekubwinya uye kujekesa migumisiro kana zvasvika kune zvipfeko zvepanyama. Zvimwe zvipfeko zvakawanda zviri kubudiswa pane zvakasikwa.
Ne mascara chaiwo unowana refu uye yakawanda eyelashes. Iine zvinoshandiswa zvakadai semakameraina mafuta. Iyi ndiyo mafuta anokurumidza-omisa anokurumidza kuisa mumhepo, haisi kuvhara uye haigoni kuparara.
Kuwedzera kune Hauoneki hanya tumiti kunewo kwezva dzvuku dzinongoitika zvizoro. Organic lipsticks dzisina chicherwa mafuta, preservatives kana chakagadzirwa siyana. Iine zvokudya zvinokonzerwa namafuta ehuni, inoita kuti nyuchi dzinyatsobudiswa uye zvinomera zvehu. Saka hazvibatsiri kana iwe uchinge uwana rimwe remuromo mumuromo wako.
Zvigadzirwa zvepanyama zvinofanira kushandiswa kunyanya kugadzirwa kweganda, asiwo kana iwe ukanyatsocherechedza kuchengetedza kwepanyama uye zvakatipoteredza.
Zvimwe zvipfeko zvepanyama zvisizvo zvitsva. Yakagadzirirwa kudyisa ganda rako uye kuderedza zvinetso zveganda. Izvo zvinoshandiswa zvinotorwa kubva pane zvakasikwa zviwanikwa.
Unoziva sei zvipfeko zvepanyama?
Pamusoro pezvinhu zvakasiyana-siyana zvinhu zvakadai se "zvakasikwa", "zvakasikwa" kana "organic". Zvisinei, pane kazhinji kacho hakuna zvinhu zvepanyama mune zvigadzirwa izvi. Verenga zvakajeka zviri kuvhara. Saka iwe ungati sei kana chiri chaiwo zvipfeko zvepanyama? Batsira kukupa zviyero zvehutano zvezvipfeko zvepanyama. Zvisimbiso zvaunogona kuvimba ndizvo, somuenzaniso, mazita echiNATrue, chisimbiso che ECOCERT uye chisimbiso BDHI Controlled Natural Cosmetics. Zvikwereti zvine chisimbiso ichi ndezviyeuchidzo, sante, dr. Hauschka kana Lavera.
Ndechipi musiyano pakati pezvisikwa zvechisikigo uye zvinokonzerwa nezvikafu?
Kakawanda, zvipfeko zvepanyama zvinokanganisa zvakakonzerwa nezvinhu zvinokonzerwa nezvikafu. Zvimwe zvipfeko zvekare zvinowanzobatanidza michina inongova nezvinhu zvishoma zvezvinhu zvakasikwa. Muzvisikwa zvipfeko zvinogadzirwa nemakemikari zvinowanikwa zvinenge zvichibvumirwa izvo zvisingakoshi. Organic cosmetics, kune rumwe rutivi, inosanganisira yakakwirira, zvinhu zvakasikwa zvakasikwa; hapana maikemikari kana maitiro anobatsira.
Nei zvipfeko zvakasikwa?
Zvigunzva zvepanyama zvinokonzera kuvhara ganda rako. Hazvisi izvo zvinokuvara uye hormone-inogadzirisa zvigadzirwa. Zvokuzora zvipfeko hazvisi kuderedza zvinhu zvose kana zvichienzaniswa nezvipfeko zveganda zvinokonzerwa, zvinokurudzira kuti zvive nyore kuzvidzora. Vagadziri vane chisikwa chezvisikwa zvepanyama vanotsigira uye vanokurudzira kuzvipira kune maitiro akanaka ekushanda uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Mukuwedzera, kuenzaniswa kwemhuka hakubvi mumubvunzo mune zvipfeko zvepanyama. Muzvipfeko zvechisikigo, zvinonhuwira zvepanyama uye dhayi zvinoshandiswa. Mafuta anokanganisa anogona kukurumidzira kutsamwisa nyanga dzakanyanya. Kushandisa kugadzirwa kwemazuva ose, kunonzwa sokuti ganda riri pasi pezvikamu hazvigoni kufema zvakanaka zvakare. Cosmetics nemasikirwo echisikigo, zvisinei, ita kuti chionekwe chive chakajeka uye chichiwedzera.
Chii chinoshanduka kune zvisikwa zvezvisikwa?
Zvimwe zvipfeko zvakasikwa zvinoita kuti simba rechisiki reganda rivepo, saka rinogona kupa kuora kwekutanga. Kusvibiswa kunogona kutanga kuwedzera, kusvikira ganda rachinjira kune kuzvidzora. Semuenzaniso, kusiyana nemaitiro echisiku usiku, hapana mafuta kana mafuta anoshandiswa usiku, asi serum inonzious. Neganda rakaoma, izvi zvingave zvisina kujairika kwekanguva. Asi ganda harinzwi kuyerwa uye rinogona kuchinja zvakare usiku. Iwe unofanirwa kupa nguva yeganda, zvakakosha kuti ugare nekambani yakatevedzana. Ganda rinowanzotora anenge mwedzi kugadzirisa.
Kune zvinhu zvakawanda zvakanaka muzvisikwa zvepanyama. Ganda rako rinoshandiswa naro uye rinopenya nekunaka kwakanaka.
Zvigunwe zvepanyama - zvipfeko zvinobva mubindu
Mafuta akanaka Cosmetics Beauty Wellness
Zvitsvaidzo zvepanyama - michero inokuita kuti uwedzere kunaka
Zvigadzirwa zvepanyama - kuti zvinodzivirira sei pakwegura
Ita zvipfeko zvepanyama iwe pachako
Zvokudya zvepanyama zvinodhaka zveimba
Bvisa mvere dzembudzi / mvere dzembudzi - ...
Kuchengeta kumba | Wellness
Mutumbi kutarisira varume | Wellness Beauty